Tuubbooyinka Jikada Sink ee jiidaya Nickel Nadiif ah
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Soodhadhka Qulqulka / WOWOW Jikada qasabadaha jiiniska jiido Nickel caday
WOWOW Sink Finkets Qashinkiisa Soo Jiid Nadiifiya Nickel
qiimeeyay 5.00 out of 5 ku salaysan 40 ratings macaamiisha
(40 dib u eegista macaamiisha)
Qolka kaliya ee bulukeetiga jikada sare leh waxay leeyihiin faa iidooyinkan soo socda: 360-wareeg wareeg ah, nadiifin dabacsan oo aan lahayn xagal dhinaceeda ah dhammaan jihooyinka;
Biyaha ayaa kufiican, oo biyaha kulul iyo qabow si madaxbanaan baa loogu wareejin karaa;
Waxaad u xakameyn kartaa heerkulka markii la doono. Rasaas-qarxin tuubbada birta birta ka samaysan, oo si dhib yar loo rakibo, heerkul sarreeya iyo iska caabin cadaadis, anti-gabow.
2310700 Tilmaamaha Rakibaadda
Ktchen tuubada leh jiidista jiida 2310700
Waa maxay mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee jikadaada? Qaar badan ayaa ka jawaabi doona tuubada jikada maadaama sheygan loo istcimaal daraasiin jeer maalintii. Ka sokow, tubooyinka jikada ayaa had iyo jeer loo arkaa inay yihiin meelaha ugu muhiimsan ee jikada. Iyadoo aan loo eegin qaabka jikadaada. Sababta qaar ka mid ah dareenka qof walba dareenkiisa waxaa si dabiici ah u taabtay tuubada jikada. Xitaa sabab dheeraad ah oo loo xusho tubada jikada saxda ah ee naqshadda jikadaada cusub. Xulashada khaldan ayaa laga yaabaa inay dheelitirka oo dhan ka saarto naqshadeynta jikadaada, ama waxaad dooran kartaa qasabada jikada ee aan ku habboonayn waxaad doorbideyso waxa aad ka fileyso xagga shaqada. Ugu dambeyntiina, tayadu dhab ahaantii ma aha mid laga taxaddaro. Mid ayaa si fudud u arki karaya waxa tuubada jikada tayada leh tahay iyo tan aan ahayn.
Laakiin sideed u aragtaa tayada? Waa inaad isticmaashaa jikada jikada sanado badan si aad u awood u yeelato inaad xukuntid haddii tayada tuubada jikada ay ka sareyso dhexdhexaad ama aysan ahayn. Waxaad si fudud ku ogaan kartaa tan muddada dammaanadda ee soo-saaraha tuubada jikada uu ku siiyo. Alaab-bixiye bixinaya dammaanad 1 sano ah wuxuu filan karaa dhibaatooyin qaarkood dhawr sano kadib. Sidaa darteed isagu ma doonayo inuu bixiyo muddo dheer oo dammaanad ah si uu u badbaadiyo kharashyada. Dhanka kale, iibiyaha tuubada jikada ee bixiya a
Muddada 5-sano ee dammaanadda, waxay aaminaysaa badeecadeeda oo runti waxay dooneysaa inay qaaddo mas'uuliyadda waxqabadkeeda inta lagu jiro sannadahaas oo dhan. Dadku waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan, muxuu u noqon waayey damaanad 10 sano ah? Hagaag, waxqabadka tubbada jikada sidoo kale waxay kuxirantahay isticmaalkeeda, dayactirkeeda iyo tayada biyaha. Tubooyinka jikada ayaa si fudud socon kara 10 sano, laakiin hagaajinta iyo xakamaynta biyaha ayaa la doorbidayaa inay dammaanad qaado cimri dheer.
Soo jiid tuubada jikada lagu buufiyo
Dad badani waxay doorbidaan tuubada jikada lagu ridayo tuunbada jikada oo idil. Sababta ugu weyni waxay tahay inaad runtii ku gaari karto dhibic kasta gudaha ama agagaarka weelka jikada. Qaabkaan, nadiifinta jikadaada kuma fududaan karo tuubada jikada kale. Mashiinka tuubbada biyaha waxaad si sahlan ugu fidin kartaa gaaristaada 32 inji dhinac walba dhinac kasta. Qasabada jikada ee caadiga ah waligaa ma gaari kartid masaafadan, sidaa darteed way adkaan laheyd inaad nadiifiso. Qashinkan jikada lagu ridayo waxaad markaa ku nadiifin doontaa jikadaada isha.
Faa'iidada ugu weyn ee qasabad jiidista jikada lagu ridayo waa in ay u egtahay quruxsan oo aad si dhib yar u dareemayso inaad haysato tuubada biyaha ku dhawaad ​​4'11 ”. Qulqulka jikada soo jiidan ee WOWOW wuxuu u eg yahay tuubada jikada ee caadiga ah. Xitaa markii aad u sii dhowdahay, waxaad ku arki doontaa farqiga u dhexeeya tuubada jikada caadiga ah. Laakiin markii aad jiidid madaxa buufinta tuunbada jikada lagu buufiyo, waxaad si lama filaan ah u dareemeysaa inaad gacanta ku haysato tuubada biyaha tuuri kara. Oo waxaad la yaabi doontaa dhererkeeda! Ka dib marka la isticmaalo tuubada biyaha, waxay si otomaatig ah ugu laabanaysaa meeshiisii ​​asalka ahayd, sida waxba ma dhicin. Shaqadan jilicsan ee la shaqeysa oo leh tuubbadeeda biyaheeda jilicsan iyo culeyska culeyska ayaa si yaab leh loogu talagalay, waxaad ogaan doontaa hal mar.
Tubada dayactirka jikada oo ay ku jirto buufin jiideysa
Ayaa jecel inuu ilaaliyo tubada jikada? Cidna ma qiyaasi karno. Dayactirka si kastaba ha ahaatee waxay u muuqataa mid ka culus kan ay runtii tahay. Markaad haysato tubada jikada, dayactirka ugu muhiimsan ee lagaa rabo inaad sameyso waa inaad si fiican u nadiifiso. Dabcan qofku waa inuu wasakhdaa ka saaraa ka dib karista jikada. Sidan ayaad u ilaalinaysaa daaha qashinka jikada qaab wanaagsan. Sida tan oo kale tubada qolkaaga jikada ayaa sii dhalaalaya sidii ay wali u cusubayd. Ka sokow, waxaa muhiim ah in wixii haraaga adag ee biyo haraaga ah laga tirtiro madaxa qasabada tuubada jikada. Gaar ahaan markii aad ku nooshahay meel biyuhu ka adag yihiin sida caadiga ah. Tani waxay asal ahaan macnaheedu tahay in biyuhu ay ku jiraan dalaalo badan. Tani waxay ku reebi doontaa waxoogaa hadhaaga jikada ka dib isticmaal kasta. Taasi dhib malahan haba yaraatee, illaa iyo inta aad tan si joogto ah u nadiifiso.
Hadaadan sameyn, chalk wuxuu si isdaba joog ah usameyn doonaa aakhirkana ma fududaan doonto in mar dambe meesha laga saaro. Tani waxay saameyn ku yeelan kartaa waxqabadka tuubbooyinka, kabaalka iyo buufinta jikada. Gaar ahaan markaad haysato tuubada jikada oo jiidaysa, waxaad ubaahan kartaa inaad nadiifiso tuubada jikadaada si qoto dheer hada iyo ka dib. Tani waxay hubineysaa in hadhaaga hadhaaga looga saaro si fudud oo sax ah si loo dammaanad qaado waxqabadka nolosha ee dhaadheer ee soo jiidida qasabada jikada.
Hawlaha waxay soo saaraan tuubada jikada lagu buufiyo
Hawlaha ka sokow, qasabadan jiidista jikada ee jiidista leh ayaa si habeysan loogu talagalay. Qaabka sare ee loo yaqaan 'qaanso arc' sare wuxuu ku siinayaa isku marnaan iyo goob ficil isla waqti isku mid ah. Nuuradda naxaas ah ee la caddeeyay waxay siisaa jiiditaankan jikada lagu buufiyo tuubada qaab cajiib leh sidoo kale. Waxay ku habboon tahay makhaayad kasta ama huteel kasta, laakiin jikadaada dhab ahaan waxay ku siinaysaa dardargelintaas aad raadinaysay.
Marka laga hadlayo shaqooyinka, qulqulka jiidista jikada ee lagu buufiyo wuxuu muujinayaa seddex hawlood oo biyo ah si ay kuu siiyaan raaxada aad raadineyso markaad nadiifineyso jikadaada. Xitaa waad ku joojin kartaa durdurka biyaha adigoo isticmaalaya badhanka khaaska ah ee madaxa buufinta. Sidan ayay tahay inaadan taaban Bixi bixiyaha markaad rabtid inaad biyaha xajiso hal ilbidhiqsi. Baalalka waxaa lagu qabsan karaa hal gacan gacmeed si uu ula qabsado heerkulka biyaha iyo cadaadiska biyaha. Iyada oo la adeegsanayo wareegga 360 digrii ee jikada jikada waxaad runti ku gaari kartaa dhammaan meelaha.
Caymis soo jiidida qasabka jikada buufin
Qalabkan jihada-dheer ee jiidista jikada lagu buufiyey waxaa laga sameeyay alaab tayo sare leh oo naxaas ah. Sidaa darteed WOWOW waxay ku kalsoon tahay inay ku siiso muddo 5 sano ah oo dammaanad ah iyo 90-maalmood oo lacag celin ah oo dammaanad ah. Kalsoonidayadu waa inay runtii kaa dhaadhicisaa qiimaha lacagta aan ku siineyno qashinkan jikada lagu ridayo.
Faa'iidooyinka ay leedahay jikada jikada marka lagu daro soosaarka si tartiib tartiib ah:
Reach Meel ballaadh ah maxaa yeelay buufinta jiidista
Design Qaab qurux badan iyo naqshad yar
 Saddex hawlood oo sahlan oo biyo ah
Technology Tikniyoolajiyad jilicsan oo jilicsan
SKU: 2310700 Categories: Qubeyska jikada, Soodhadhka Qulqulka Tags: Soo Bax, Hal gacan, Buufiyo
Waxaan si farxad leh ula yaabay sheygan. Waxaan rumeysanahay in kani yahay Shiinaha la sameeyay, laakiin waxaan ku dhex jiray qasabadaha jikada. Waxaan ku beddelay tuubo magac magac leh tuubo magac kale ah waana inaan ku beddelo gacan ku haynta 2 sano gudahood sababtoo ah dhammaadka dillaaca. Wax ka yar sanad kadib, gacanti ayaa markale sameysay. Intii aan ku bixin lahaa 4 jeer qadarka sidii aan ugu sameeyay qasabaddaan, waxaan moodayay inaan tan ku iibsan lahaa waqtigaan. Waxaan doonayay waqti dheeri ah oo cilmi baarista ah, laakiin waxaan ubaahanay qasabad shaqeyneysa. Markii ay timid, waxaan la yaabay tayada dhismaha, maadaama aysan ka yarayn tayada dhismaha magacayga mid. Qaybaha waxay ahaayeen heer caadi ah, laakiin uma maleynayo iibsashada qeybaha bedelka inay tahay ikhtiyaar. Taas markii la yidhi, qiimahan, waxaan u qaatay inay tani ahayd ikhtiyaar la tuuri karo markii uu jabo. Haddii ay ii sii socon lahayd sannad, waan farxi lahaa. Ilaa hadda, aad u fiican. Waxay u shaqeysay si bilaa cillad ah rakibaadduna waa heer caadi ah / u fudud qof kasta oo waxtar u leh. Rakiibintu waxay igu qaadatay hal saac, laakiin waqtiga intiisa badan waxaan ku nadiifiyey saxanka hoostiisa oo waxaan ka qaadi jiray qasabaddii hore. Waxaan tan ku haystay qiyaastii 2 bilood oo buufinta biyaha ayaa ku fiican labada shaqaba. Sababtoo ah tani waa madax laga saari karo, waxaan sidoo kale ku daray culeys dheeri ah tuubada si aan u hubiyo meeleyn sax ah markii aan dib ugu xaqiijinayo gacanta tuubada. Taas oo ah gargaar, culeyska si wanaagsan ayaa loo sugay, aad ayuu uga fiicanyahay qasabaddaydii hore ee sii soconaysay. Tani waa mid muhiim ah maxaa yeelay madaxa hiwaayadda ma leh buufis magnetized ah, culeyskuna waa waxa isaga hubiya. Guud ahaan, waan ku faraxsanahay tayada dhismaha, qurxinta, iyo astaamaha barta qiimaheeda. Tani waa qiimo weyn. Waxaan kugula talin lahaa.
Kaliya waxaan ku badalay dhismaheyga oo la casriyeeyay Moen qasabada ($ 260) iyadoo la adeegsanayo WOWOW Jikada Qasabadaha Fududeeyaha Halbeegga ah ee jikada lagu riixo oo lagu buufiyo burushka Nickel Commercial. In kasta oo Moenku cusbaa (guri cusub) haddana wuxuu ahaa mid laga argagaxo in la isticmaalo.
Mashiinka WOWOW waa mid xarrago leh, siman oo si fudud loo isticmaali karo. WOWOW waa cutub aad ugafiican Moen iyo qiimo runti tartan ah. Rakibaadda ayaa ka ammaan badan oo ma sii daayo.
Ka dib markaan qaatay 4 bilood oo aan dhibtoonayay inaan helo heerkulka oo aan u jeclaado markasta oo aan isticmaalo saxanka jikada, runti waan dhoolla caddeeyay sida ay u fududahay in la dejiyo heerkulka biyaha iyo socodka si sax ah iyadoo lala siman yahay isla markaana sax ah.
Buufiska soo jiidaya wuxuu u shaqeeyaa sidii soojiidasho wuxuuna ku laabanayaa qoorta swan isagoon ku riixin guriga,
SHAN xidig oo wareegsan
Wowow Faucet si dhakhso leh ayuu u yimid oo waxaa lagu soo raray si ammaan ah si aan waxba loo xoqin ama loo xoqin. Tuubada waa qurux badan tahay! Waa mid casri ah oo adag. Tayo aad u fiican iyo qiimo weyn. Rakiibintu way fududahay oo qasabadda 3-daloola ayaa si qumman ugu habboon weelkeenna hore. Tuubadaani waxay na siisaa cadaadis aad u xoogan oo biyo ah sidoo kale. Waan jeclahay kaliya! Waxaan iibsan doonaa qasabado dheeri ah oo loogu talagalay musqulaha waxaanan eegi doonaa shirkadan marka hore maadaama ay bixiyeen adeeg macmiil oo aad u fiican sidoo kale.
Midkeenii hore aad buu u yaraa oo dhib ma leh. Tuubada jikada ayaa disha. Waxaan helay qasabadani inay ka raqiisan tahay inta badan noocyada kale ee caanka ah. Tuubada ayaa la timid gabi ahaanba xirmo iyo tilmaamaha .Ku rakibisteedu way fududahay oo waxaad u baahan tahay inaad samir badan samayso. Madaxa buufinta waxaa lagu hayaa miisaanka lagu rakibay saxanka hoostiisa. Cadaadiska biyuhu waa mid deggan oo siman. Way fududahay in la xakameeyo. Way dheertahay Taasi waa qaybta aan ugu jecel nahay. Aad ugu habboon in wax walba la dhaqo.
Waxaan ahay 64 sano jir waxaana la igu sameeyay 2 qaliin oo qoorta ah sidaa darteed ka hoos noqoshada golaha wasiirada waxay ii ahayd shaqo culus laakiin sidii marren hore ayaan waligay is dhiibin! Isku soo wada duuboo inta suurtogalka ah intaadan rakibin! Taasi waa habka caqliga badan!
Midka kale banaanka u soo saar ka dib bilow inaad nadiifiso dusha meesha waaskada oo aad shaqo tagto!
HADII AADAN fiicnayn cadaalad, gacaliye, maxaa yeelay waxaa ka maqan tilmaamo wanaagsan, waxaan kuu soo jeedinayaa Plummer haddii kale waad sameyn kartaa.
Waa qasabad qurux badan oo cajiiba! Xaaskeyga wey jeceshahay aniga oo kale.Qasabadda kale ee jikada waxay socotaa 6 sano oo kaliya! Waxaan rajaynayaa in kani uu sii dheeraado, aad uga sii dheeraado maadaama uu sifiican u dhisan yahay!
Tani waxay hoos u dhigeysaa tuubada jikada ka dhigaysa saxanka barxadda hoose ee qamriga inay u muuqato mid casri ah. Tuubada waa fududahay in la rakibo. Waxaan jeclahay wareega 360 darajo oo aan jiidi karo si aan u dhaqo gees walba oo saxanka ka mid ah. Sidoo kale, hawlgalka hal gacan ayaa noloshayda u fudud. Waxaan u hagaajin karaa heerkulka biyaha si hufan. Qiimaha aan bixiyay, qasabadani waa mid mudan.
Tuubadaani waxaa lagu rakibay muddo bil ah gurigeyga hadda & waxay ahayd heer sare uqaadista jikadayada. Rakiibintu uma fududaan sidii la rabay mar haddii tuumbooyinkii ku lifaaqnaa ay aad u gaabnaayeen- Waa inaan helaa tuubbooyin dheeri ah & lifaaqyo si aan u gaaro tuubbada
Tuubada ayaa ku jirta tayo wanaagsan, culus, adag, dhexjir ah (ugu yaraan waxa aan arki karo), tuubbo dhaadheer oo jilicsan. Waan arki doonaa inta ay socon doonto. Waan soo laaban doonaa si aan u cusbooneysiiyo faalladayda haddii ay jirto arrin.
Waxaan u arkaa inay dhawaan soo rogeen fiidiyoow rakib ah, taas oo si cad u muuqata. WAA INAAD daawataa kahor rakibida.
Khiyaamadayda: Uma baahnid inaad ku rakibtid shaashadda dhinaca. Xaqiiqdii waxaan doorbidayaa oo aan ku rakibayaa xarkaha xagga hore, weli wax dhibaato ah ma jiro. Waxaan waydiistay qof inuu iga caawiyo rakibida. Rakibaadda runti waa mid aad u fudud. Laakiin dhibaatadaydu waxay tahay ma haysto qalab aan ku qiyaaso tuubada asalka ah, ee si xun u daxashay.
Aad ayaan ula dhacsanahay qasabaddayda cusub! Waxaan ogaa oo kaliya inay ahaayeen $ 130 wax ka yar magacyada magacyada caanka ah sidaa darteed waa inaan isku dayaa. Rakiibtu waxay ahayd mid fudud umana baahna in loo yeero xirfadle. Qasabadu si fiican ayey u shaqeysaa. $ 70 $ runtii ma jiraan wax badan oo laga cawdo.
Waxaan u bixiyay sida $ 80? Waxaan ku arkay qasabado isku mid ah $ 120 iyo ka badan. Waxaan qaatay saacadna waxaan jiidayaa kii hore, laakiin tan waxay ku gashay 10 daqiiqo ama wax la mid ah. Tilmaamuhu waxay ahaayeen kuwo aan caddayn, laakiin waxaan badalay in kabadan dhowr umana baahnin. Gaarsiinta degdegga ah, miisaanka wanaagsan, waxay u muuqataa macaan!
Waxaan u isticmaali jiray inaan ku beddelo qasabadda jikada. Rakiibintu way fududahay. Gacanta keliya ayaa biyaha ku xiri kara meel kasta ha ahaato kuleyl ama qabow iyadoo lid ku ah qasabaddii hore, oo ay sameysay Delta, halkaasoo biyuhu ku xirmaan iyada oo gacanta kaliya ay ku jirto booska. Waxaad dooran kartaa buufin ama toosan iyo badhan aad ku hakato. Waad ka saari kartaa dheecaanka meel kasta oo saxanka ka mid ah taas oo fududaynaysa nadiifinta.
Fikir ahaan tani waa wax soo saar qiimo leh. Waxay ku samaysay nikkel la caday, wax la mid ah birta birta ah. Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka jeclahay qasabadda waa in uu jiro tuubbo fidsan oo aad hoos u jiidi kartid ujeeddo badan awgeed. Xamili waa raaxo leh. Wax wanaagsan oo loo isticmaalo tuubada.
Miyaad tan ku rakibtay dhowr bilood hadda waxayna u shaqeysaa si yaab leh. Waxay rakibaan ahaa mid aad u fudud. Waqti adag ayaa laga qaaday kan hore. Kani waxaa lagu rakibay daqiiqado wuxuuna si fiican u shaqeynayay tan iyo markaas.
Aad ayaan ula dhacsanahay qasabaddayda cusub! Rakibaadda waxay ahayd mid fudud oo aan loo baahnayn in loo yeedho xirfadle. Waan jeclahay wax walba oo ku saabsan, buufinta hoos u jiida, dhererka, cadaadiska biyaha ayaa si aad ah kor ugu kacay! Ma wada rogi karo qaraxa oo dhan markii aan kariyo maxaa yeelay waxaan sameyn lahaa jahwareer weyn! Iyagu sidoo kale, waxay leeyihiin dammaanad dheeri ah oo kaliya caddaynaysa kalsoonida ay ku qabaan wax soo saarkooda.
Si fudud u rakibid fudud, oo leh tilmaamo aan waxtar lahayn; sidoo kale tilmaamo ma soo diri karto gabi ahaanba. Iyadoo taas la dhaho runtii qasabad fiican oo qiimo aad u wanaagsan ku jirta.
Tuunbada jikada waa fududahay in la isticmaalo. Tayada sidoo kale waa mid aad u wanaagsan, way fududahay in la xakameeyo socodka biyaha.Waa mid aad ugu habboon in la isticmaalo, aad ayaan u jeclahay.
Waxaan u adeegsaday tuubiste si aan u rakibo tan iyo markii aan waayey qalab gaar ah oo lagu kala furfuro qasabaddii hore. Waan jeclahay habsami u socodka iyo tayada qasabaddan.
Tuubada waa teknolojiyad sare oo si fiican u shaqeysa, awoodda fidinta xadhkaha ayaa ka dhigaysa mid aad u qiimo badan sidoo kalena waxtar u leh nadiifinta. Qalabka la sameeyay waa kuwo tayo sare leh mana heli karo wax cillad ah qasabadani. Waan ku faraxsanahay!
Jeclow qasabaddaan. Waxaan kusameynayaa jikada jikada oo qasabad cusub ayaa liiska ku jirtay. Tuubadaani waxay cadeeyeen inay tahay wixii aan raadinayay.
Tuubbada aan hadda ku shaqeeyo waxay u muuqatay mid duug ah oo aan duugoobayn, laakiin ma aanan doonaynin inaan tan ku bixiyo si aan ugu beddelo. Tuubbooyinka iyo jadwalka oo qiime leh, laakiin tani aad bay macquul u ahayd oo waxay u egtahay mid aad uga wanaagsan fursado badan oo qiimo sare leh. Ku rakibku waqti yar ayuu igu qaatay, laakiin guud ahaan, aad baan ugu qancay sheygan.
Waxay ahayd inaan kordhiyo khadadayda laakiin gurigii hore. Wax soo saarku wuu fiicnaa markaa waan fikiray. Kafiican markaa kan aan ku iibsaday saxanka kale ee bakhaarka qalabka.
Tilmaamaha ayaa inyar kafiicnaan kara laakiin fiidiyowyada youtube-ka qaarkood ayaa caawiyay. Ma aanan lahayn waayo-aragnimo hore waxaanan ku guuleystey inaan ku arko il madow oo leh baraha laakiin waxay umuuqataa mid aad u fiican. Waxaa la isticmaalayay dhowr bilood oo aan wax dhibaato ah.
Aad ayaan ugu faraxsanahay qasabadani! Aad u fudud oo toos ah si loo soo dajiyo. Si fiican ayuu u shaqeeyaa waxna ma dareemayo raqiis. Waxay umuuqataa mid weyn oo shuqullo yaab leh! Si aad ah ugu talinaynaa!
Waa wax aad u wanaagsan oo fudud in la rakibo, quruxsan sida midabka, waxay la mid tahay lebenkayga jikada.
Aad ayey u fududahay rakibideeda Waxaan jeclahay inay leedahay 3/8 ′ dhuumaha sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho inay ku xirto liin ama kalsiyum maadama waxyaabo badan oo ka mid ah qalabka lagu keydiyo biyaha ay sameeyaan.
Waxaan hayaa qasabad hore oo jikada ah, kaliyana waan badalay, aad baan u jeclahay qasabadaan, way fududahay in la rakibo waxaad sameyn kartaa naftaada iyo qiime wanaagsan.
Yaab weyn! Waan jeclahay naqshada, muuqaalka iyo dareenka isticmaalka qasabadda. Dhismaha lagu buufiyey waa weyn yahay !! Waxaan sidoo kale ogaaday in cadaadiska biyuhu uu aad uga fiicanyahay qasabaddaydii hore oo ahayd layaab fiican.
Rakiibintu way fududahay. Waxaan kula talin lahaa qasabadani qofkasta oo ka fiirsanaya iibsashadiisa.
Waxaan helay qasabadda qasnadda maalmo yar. Ninkayga ayaa rakibay shalay. Rakibid aad u fudud. Waa heshiis wanaagsan. Waxaan ku rakibnay qasabaddan saxanka jikadayada. Wax daadanaya ama soo laalaada. Waxaan jecel nahay tan.
Qasabad biyo yaab leh !! Dhibaatooyin abuuris nagama qabaan. Shaqeeyaa weyn oo si aad u anfacaya.
Tilmaamaha ugu yar si loo xaqiijiyo habka rakibida si kastaba ha noqotee dhammaan qeybaha waxay kuxiran yihiin si gaar ah sifiican dhammaan shaqooyinka waa kuwo aad ufiican.
Iibsaday qasabadani lix bilood ka hor aad bayna ugu qanacday sida ay u shaqayso waxayna u egtahay mid aad u fiican
Waan eegay ka hor intaanan iibsan. Khadadka kulul ayaa ka gaaban kan hadda aan haysto. Dhib malahan, waxaan ku kordhinay Ace. Si fudud loo beddelo Waxay umuuqataa mid wanaagsan, socodka waa mid xoogan. Waxaan kugula talin lahaa qasabadani.
Guud ahaan wax soo saarka wanaagsan. Sanka lugaha ayaa si fudud hoos ugu soo dhacaya. Waxaan haysanay tuubiste maxaa yeelay tuubooyinkeennu waxay aad ugu dhawaayeen darbiga golaha wasiirrada.
Ma hubin markii hore maadaama aynaan waligeen maqal sumaddan laakiin waxaan go'aansanay inaan isku dayno ku saleysan dhammaan dib u eegista weyn. Aad ayaan ugu faraxsanahay qasabaddan. Tayada waa weyn tahay, muuqaalku waa fiican yahay, si habsami leh ayuu u socdaa, qiimo weyn iyo baakado waaweyn. Waxaan haysanay muddo bil ah hadda mana faraxsanaan karin.
Waxaan u baahanahay inaan beddelo qasabaddaydii hore ee jikada waxaanan u maleynayaa in kani yahay doorashada ugu habboon. Waxay ku timid sagxad god ah oo midkeygii hore ah. Waxaa jira fiidiyoow bogga wowow ah oo lagu barayo habka loo rakibo. Waxay qaadataa oo keliya 3 daqiiqo in aad gebi ahaanba dhammayso rakibidda. Socodka biyuhu runtii waa siman yahay oo xoogan yahay.
Anigu aad ayaan u xushay, waxaan sameeyaa cilmi baaris fara badan waxaanan jecelahay inaan u baxo magac magac waligeyna hoosta xariiqda, sidaa awgeed waxaan sameeyay cilmi baaris aad ufiican kahor intaanan ku darin magacan magaca ah ee aan la garanaynin ee kujira liistadeyda caanka ah ee caanka ah. naqshad la mid ah in ka badan laba jibbaar ama saddex jeer qiimaha. Laba arrimood oo kale: 1. Dhowr dib u eegis oo lagu xusay hoos u soo jiidka dib ugama noqonin oo dib uguma soo laaban meeshii si habboon, bidix laalaadinaya. Taasi dhab ahaantii waa arrin rakibid ah. Waxaa jira miisaan u baahan in la isku hagaajiyo, taas oo si fudud u fududahay, markaa si fiican ayuu u shaqeeyaa. 2. Midab - sawirradu waxay muujiyeen inay la mid yihiin midabka birta ee birta birta ah ee birta lagu caddeeyo, laakiin waxay ka samaysan tahay nikkel caday, kaas oo yeelan kara midab diiran, midab bunni ah oo aan ka walwalsanahay inaysan la jaan qaadi karin qalabka SS. Ma aanan helin wax dib u eegis ah oo ku saabsan dhinacaas ama su'aalaha, sidaa darteed aniga ayaa su'aasha isweydiiyey waxaana helay jawaabo aad u wanaagsan oo ii xaqiijinaya in aysan lahayn midabka bunni-ga ah isla markaana ay si fiican ula shaqeyn doonto qalabka birta birta ah. Taasi waxay noqotay talo wanaagsan, waad ku mahadsan tihiin dadkaas waqtiga i siiyay inay ka jawaabaan su'aashayda, maan niyad jabin. Tani waa badeecad tayo sare leh, naqshadeynta hoos u soo jiidaya iyo muuqaalka buufin waa wax cajiib ah, saxammadayda weligood saafi ma aha! Waxa kaliya ee aanan lahadli karin waa cimri dherer maxaa yeelay waxay ahayd bil kaliya, laakiin maadaama inta badan qasabadaha jikada, si joogto ah loo isticmaalo, mana haysto sabab aan ugu fikiro inaysan sii socon doonin isla noocyada qaaliga ah. Xulasho weyn, u kac, keydso $, waxaan ku faraxsanahay inaan kula taliyo 5 xiddigood.
Dib-u-eegiddayda asalka ah ka dib, adeegga macaamiisha ayaa ila soo xiriiray si aan uga caawiyo beddelidda qasabadda khaladka ah inkasta oo aan dhaafay daaqaddii soo noqoshada WOWOW. Caawintooda waan awooday inaan dayactiro tubbada laakiin dhanka kale waxay muujiyeen inay keensadeen bedel si kasta ha noqotee haddii aanan awoodin inaan hagaajiyo kii ugu horreeyay. Dhibaatadu waxay ahayd in farsamaynta gudaha ay u oggolaatay xakamaynta inay u dhaqaaqdo dhinac ilaa dhinac si ay ula qabsato heerkulka laakiin aan kor iyo hoosba u furin socodka biyaha. Waxay u baahneyd in lakala saaro oo dib loo fariisto si ay si buuxda ugu shaqeyso. Tuubada hadda waxay u shaqeysaa sidii la filaayay muuqaalkuna waa sidaan doonayay. 5 xiddigood oo loogu talagalay adeegga macaamiisha ee shirkaddan!
Asal ahaan: Tuubadaani waa qurux badantahay sicirkuna wuu saxnaa, nasiib daro ma shaqeyso. Biyo ma soo baxaan. Gacanku wuxuu u wareegayaa dhinac ilaa dhinac si uu ugu beddelo kuleyl / qabow laakiin kor iyo hoos uma dhaqaaqo si uu u furo qasabadda. Waxaan arkay faallooyin kale iyo su'aalo laxiriira biyo la'aan sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay noqon karto arin ku saabsan waxyaabaha qaarkood. Dhammaan isku xirnaanta si sax ah ayaa loo xiray waxaana laydhku shidan yahay. Caddayn dheeri ah oo ah in biyuhu daaran yihiin oo la heli karo ayaan ogaaday biyo ka soo butaacayaan tuubooyinka ka dib markii aan ka jaray qasabadda. Tan iyo markii aan u iibsaday dhowr bilood ka hor dib-u-habeynta qolkayga dharka oo hadda la dhammaystiray Aad ayaan uga xumahay in aanan isticmaali karin qasabaddan quruxda badan haddana daaqadda soo laabashada ayaa dhammaatay sidaa darteed waxay umuuqataa inaan ku dhegannahay.
Qasnadeena jikada ayaa goor dhaweyd dhimatay waxaanan amar ku bixinay qasabadani badalkeeda, anagoo ku faraxsan inaan si dhaqso leh u helno oo aan awoodno inaan rakibno dhamaadka usbuuca si aan dib ugu bilawno isticmaalka jikada jikadayada. Si kastaba ha noqotee, markii aan fureynay sanduuqa, isla markiiba waxaan ogaanay xoq weyn oo kudhamaatay dhamaadka qeybta dheer ee tuubada. Tani xaqiiqdii waa arin QC ah maadaama xoqitaanku aakhirka miridhsan doono, iyada oo aan lagu xusin waxay umuuqataa runtii wax xun. Aad ayaan u jahwareersanahay maxaa yeelay hadda ma isticmaalno saxanka jikadayada illaa aan ka helno mid kale. Tani waa cillad weyn. Ma rumaysan karo wax sidan oo kale ah lama qaban intii lagu jiray hubinta tayada kahor intaan alaabada la soo rarin oo la rarin! Aad ayaan u jahwareersanahay maadaama aan runtii rajeynaynay inaan rakibno tuubada jikada oo aan weelkeena kor u kacno oo aan mar labaad sii wadno!
UPDATE: Waxaan dib u cusbooneysiinay dib-u-eegiskeena 1 ilaa 5 xiddigood sababtoo ah adeegga macaamiisha ee aadka u wanaagsan ee aan helnay ka dib markii aan dhajinnay dib-u-eegista hore. WOWOW waxay u badan tahay inay tahay adeegga macaamiisha ugu wanaagsan ee aan waligeen ka helnay shirkad kasta. Waxay noo soo direen qasabad khafiif ah oo aan lahayn cilad ka timid DHL oo ka timid Shiinaha oo timid maalmo yar iyo sidoo kale saxan yar oo dusha sare ah, oo sidoo kale ka yimid Shiinaha oo loo sii mariyay DHL. Markii aan rakibnay tuubada ayaan runtii jeclaysanay, waxay umuuqataa mid qurux badan oo si qurux badan u shaqeysa. Mar labaad, WOWOW dhab ahaantii way ka sii gudubtay oo dhaaftay si ay xaaladdan nooga dhigto annaga oo aad iyo aadna ugu riyaaqnay adeegga macaamiishooda.
Tuubadaani waa mid lagu beddelayo 15 jir “magac sumadeed” ah oo ah hal gacan oo keliya oo leh madaxa buufiska hoos u riixa. Tuubadaani waxay kabilaabatay daadinta fadhiyada waalka ee jirka tuubada mana aanan rabin inaan isku dayo inaan dayactiro kuwaas. Ku qarash gareeyay 2.5 - 3 saacadood soo saaristii cutubkii hore ion daxalka iyo xargaha laga xayuubiyay ayaa ka dhigay qeybtaan shaqada mid aan lakala furi karin Taasi iyo naqshadaynta farsamo xumo ee cutubkii hore waxay u sameeyeen dhiig badan, dhidid, iyo ilmadayda dhinacayga.
Taa bedelkeed, qasabada cusub ayaa la rakibay laguna tijaabiyay qiyaastii 35 daqiiqo. Laba iskuxir oo dun leh oo soo galayaasha kulul iyo qabow iyo mid isku xirma dun weyn oo qasabadda ah si ay u dhex gasho interface voila, waa la qabtay.
Hubso oo ku dar cajaladda Teflon shaashadda isku xirnaanta kuleylka / qabow; kuma jiraan baakadaha. Tilmaamaha waxay ku qoran yihiin nooc ka mid ah waxa u muuqda Mongolian-ka Dibadda oo loo turjumay Ingiriis taas oo sababi doonta burburka maskaxda ee macallin kasta oo naxwaha iskuulka, yacni "Rakibista dhammayn iyo daadin imtixaan ama maahan." Mahadsanid in sawiradu ay aad ufiicanyihiin sameynta qeybaha hadalka f laakiin wali qosol badan.
Wax walba waxaa lagu soo daray baakadaha (marka laga reebo cajaladda xiritaanka); saxanka escutcheon, gasketka firaaqada, allen wrench, iyo 3/8 ilaa 1/2 adabtarada isku xidhka kuleylka / qabowga (haddii loo baahdo)
Intaas oo dhan marka la dhaho tubada cusubi waa mid si heer sare ah u shaqeyneysa isla markaana ah mid aad u wanaagsan oo ka muuqata tii hore. Waxaan aad ugu talin lahaa oo waxaan ku dari lahaa in qiimaha uu ahaa $ 75 - $ 100 ka yar magaca u dhigma magaca. Haddii tan ay sii socoto illaa inta ay beddeshay, aad ayaan u farxi doonaa.
Aad ayaan ula dhacsanahay qasabaddayda cusub! Waxaan ku jiray baahi daran oo waxba kama ogayn qasabadaha, kaliya dhawr magac oo summad leh. Daraasaddayda waxaan ku helay WOWOW iyo dib u eegid kastaaba waxay ahayd mid gaar ah. Waxaan ogaa oo kaliya inay ahaayeen $ 100 wax ka yar magacyada magacyada caanka ah sidaa darteed waa inaan isku dayaa. Rakibaadda waxay ahayd mid fudud oo aan loo baahnayn in loo yeedho xirfadle. Waan jeclahay wax walba oo ku saabsan, buufinta hoos u jiida, dhererka, iyo cadaadiska biyahaygu aad ayuu u kordhay! Ma wada rogi karo qaraxa oo dhan markii aan kariyo maxaa yeelay waxaan sameyn lahaa jahwareer weyn! Aan kuu sheego marka Home Depot uu leeyahay iib weyn 4 maalmood ka dib markii aan rakibo tuubbada cusub xitaa iskuma dayin inaan eego. Iyagu sidoo kale, waxay leeyihiin dammaanad dheeri ah oo kaliya caddaynaysa kalsoonida ay ku qabaan wax soo saarkooda.
WOWOW caday steel jikada fiicni Tubada - P ...
La iibiyey: 50
La iibiyey: 85